Kedu ka otu ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya nwere ike isi kwado omume na -adigide?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Sustainability News » Kedu ka otu ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya nwere ike isi kwado omume na -adigide?
Na -agbasa Akụkọ Europe • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Mgbasa Ozi • Iwughachi • Sustainability News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Kọmịshọna Njem Europe (ETC), nke na -anọchite anya ndị otu njem nlegharị anya mba 33 na Europe, ebipụtala akwụkwọ ntuziaka ọhụrụ na agbamume omume njem nlegharị anya - ntuziaka nke na -akọwa etu ndị otu njem na mba na mpaghara nwere ike isi gbaa ndị na -eme njem nlegharị anya na ọkwa niile ume. ọrụ ha kwa ụbọchị.
Ndị na -eme iwu, ndị otu njikwa njedebe, ụlọ ọrụ njem, ndị obodo na ndị ọbịa onye ọ bụla nwere ọrụ ha ga -arụ na mgbanwe mpaghara.
Akwụkwọ ntuziaka ETC ọhụrụ na -eweta idoanya etu otu ndị njem nwere ike isi kwado omume na -adigide
COVID-19 emetụtala ma ụlọ ọrụ na ndị na-azụ ahịa iche echiche dị iche, yana nkwado ugbu a dị ka ọkwọ ụgbọ ala dị mkpa na mkpebi ịzụta
Site na nlebara anya ọhụrụ na ịnakwere omume na-ebelata mmetụta adịghị mma nke njem n'ihi COVID-19, akwụkwọ ntuziaka ahụ nwere ọmụmụ ihe bara uru sitere na ụlọ ọrụ na ebe ụwa niile nke megoro nke ọma na omume akụ na ụba, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na omume gburugburu ebe obibi n'oge gara aga. afọ.
Ọmụmụ ihe ọmụmụ iri abụọ gụnyere n'ime akwụkwọ ntuziaka a na -akọwa ụzọ ụzọ Europe na ebe ndị ọzọ n'ụwa niile si etinye ụzọ na -adigide na mpaghara njem na njem nlegharị anya ha, yana isi ihe dị mkpa maka ndị otu njem nlegharị anya nke mba (NTOs) na ndị na -ahụ maka njikwa ebe (DMO).
Itinye ụkpụrụ n'ọrụ, Kọmitii Njem European (ETC) kwenyere na ndị otu njem nlegharị anya mba na mpaghara Europe nwere nnukwu ọrụ ha ga -arụ n'ịchịkọta ndị nke ha nwere ọnụ iji zụlite otu echiche maka mmejuputa njem nlegharị anya.
Ọhụụ a na-agba ha ume ka ha na ndị mmekọ azụmaahịa na agụmakwụkwọ na-arụkọ ọrụ, yana ngalaba ọha na mkpakọrịta ụlọ ọrụ iji mepụta nghọta bara uru na ịchọpụta ụzọ iji nyere ndị ọbịa Europe aka ime nhọrọ ndị ọzọ metụtara gburugburu ebe obibi na ime obodo tupu na n'oge njem ha.
Akwụkwọ ntuziaka ahụ na-achọpụtakwa na ndị otu njem na ndị njem, ọkachasị obere na obere ụlọ ọrụ (SMEs), ndị chọrọ ime ihe, na-esirikarị ike ịgagharị na usoro nzere nzere, usoro nleba anya, usoro itinye ego, mkpọsa, na ọbụlagodi akụrụngwa dị na nkwado 'oghere'. Ọmụmaatụ nke omume dị mma, yana ọtụtụ ndụmọdụ bara uru ka enyere n'akwụkwọ ntuziaka, nke dị ugbu a iji budata n'efu na webụsaịtị ETC.
N'ikwu okwu n'akwụkwọ a, Luís Araújo, Onye isi oche nke ETC kwuru, sị: “Ebe njedebe nwere ọrụ dị mkpa ọ ga-arụ iji wusie ọnọdụ Europe ike na iduga mgbanwe gaa ụwa nke nwere ọrịa na-efe efe. Iji mezuo nke a, ETC na-atụ anya akwụkwọ ntuziaka a ga-akwalite ịkekọrịta ihe ọmụma ma rụọ ọrụ dị ka ụgbọ ala maka NTO na DMO iji mee ka ebe ha ga-adigide ma nwekwa ike n'ime ogologo oge. Akwụkwọ ntuziaka a ga-ewepụta ụzọ maka ịkekọrịta ihe ọmụmụ dabere na akaebe na omume nke enwere ike itinye n'ọrụ site na ebe iji gbaa ma njem njem ma rịọ ka ndị otu mee ihe nke ọma. Anyị kwenyere na akwụkwọ ntuziaka a ga -akwado ebe ndị Europe na mbọ ha na -ewu ngalaba njem nlegharị anya nke na -akwanyere gburugburu ebe obibi ùgwù nke ga -eritekwa uru akụ na ụba obodo na obodo n'afọ ndị na -abịa. ”
COVID-19 na-amanye ụlọ ọrụ na ọha na-eche echiche dị iche
Okwu maka ịnakwere omume na -ebelata mmetụta ọjọọ nke njem nlegharị anya siri ike mgbe niile, agbanyeghị, oria ojoo a enyela nnukwu mgbanwe na ọnụọgụ ọkọnọ yana usoro chọrọ ka egosi na nkwado bụ isi ihe na -eme mkpebi ịzụta ndị njem na isi ihe nke asọmpi n'etiti azụmahịa ndị njem na Europe. Ọrịa na -efe efe amanyela ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya ka ha nwaa ma were ọnọdụ ndị a wee tinye ụkpụrụ na -adigide n'ebe niile.
Akwụkwọ ntuziaka dị n'efu.